कानुनी राज्य भनेको के हो ? कानुनी राज्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्व उल्लेख गर्दै यसको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । « Nijamati Khabar
प्रश्न : कानुनी राज्य भनेको के हो ? कानुनी राज्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्व उल्लेख गर्दै यसको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । (१०)
कानुनी राज्य : कानुनी सर्वोच्चताराज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो । यसका अलावा सबैलाई कानुनको समान प्रयोग, राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरू कानुनका आधारमा सञ्चालन हुनुलाई कानुनी राज्यका गुण मानिन्छ ।
बेलायती कानुनविद एभी डायसीले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका सिद्धान्तमा कानुनको सर्वोच्चता, कानुनका अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपजका रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानले पनि कानुनी राज्यका मूल्य–मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ ।
कानुनी राज्यका लागि आवश्यक तत्वहरू;
कानुनी राज्यको महत्व;
अन्त्यमा, कानुनी राज्यलाई लोकतन्त्रको आत्मा भनिन्छ । त्यसैले हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले कानुनी राज्यको रक्षा, मानव–अधिकारको संवद्र्धन र नागरिक सर्वोच्चतामा जोड दिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य शासकीय कार्यप्रणालीमा समेत कानुनी राज्यलाई लिखित रूपमा अवलम्बन गरिएकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा समेत लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रश्नः व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय लेख्नुहोस् । (५)
‘आयात घटाऊ : निर्यात बढाऊ’
व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपायहरू;
अन्त्यमा, नेपालको कुल व्यापारमा आयातको अंश ९१ प्रतिशत र निर्यातको अंश ९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पार्न सक्ने जोखिम रहेको व्यापार घाटाको न्यूनीकरण गरी सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको खाँचो देखिन्छ ।